Chelsea oo xiiseyneysa inay la soo saxiixato laacibka kooxda PSG ee….. – Gool FM
Horudhac: Alaves vs Real Madrid… (Los Blancos oo doonaysa inay ka soo kabato labo guuldarro oo is-xigay)
AC Milan, Inter Milan, Roma iyo Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doono horyaalka Serie A
Chelsea oo xiiseyneysa inay la soo saxiixato laacibka kooxda PSG ee…..
Dajiye September 8, 2020
(London) 08 Seb 2020. Shabakada “Le10Sport” ee dalka Faransiiska ayaa shaacisay in kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku fikireyso inay la soo saxiixato goolhaayaha Paris Saint-Germain ee Alphonse Areola.
Alphonse Areola ayaa ugu ciyaaray Real Madrid qaab ahaam oo hal xilli ciyaareed ah xagaagii hore, kaddib wuxuu ku laabtay kooxdiisa Paris Saint-Germain xagaagan.
Waxay noqotay wax aan macquul aheyn in Alphonse Areola uu fursad ka helo safka kooxda Paris Saint-Germain, gaar ahaan kaddib bandhiga cajiibka ah uu ka sameeyay Keylor Navas naadiga PSG xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Haddaba Shabakada “Le10Sport” ayaa tilmaamtay in Chelsea loo soo bandhigay inay qandaraas la gasho goolhayaha reer France ee Alphonse Areola inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, si uu badel ugu noqdo goolhayaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga oo la filayo inuu ka tagi doono Blues.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Chelsea ay u dhaqaaqi doonto saxiixa Alphonse Areola haddii ay ku guuldareysato saxiixa goolhaayaha kooxda Rennais ee Edouard Mendy oo ay ka dhiganeyso bar-tilmaameedkeeda koowaad.
Memphis Depay oo ka hadlay wararka la xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Barcelona
"Ku guuleysiga saddex Champions League oo isku xigta waa wax ka badan inta aan qiyaasayay"- Toni Kroos